Nheyo dzekutanga dzeWanano Yekutanga kuna Genesisi. Yakaparadzwa nechivi nekuti Satani akavenga Wanano.
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Nheyo dzekutanga dzeWanano Yekutanga kuna Genesisi. Yakaparadzwa nechivi nekuti Satani akavenga Wanano.
Nheyo dzekutanga dzeWanano Yekutanga kuna Genesisi. Yakaparadzwa nechivi nekuti Satani akavenga Wanano.
Wanano ndiyo hwaro hwekuunza hupenyu hwevanhu panyika. Hupenyu hwemunhu hwakakosha kuna Mwari nokuti mweya wemunhu unokwanisa kutenda munaMwari nenzira dzake uye anofanirwa kuzopindura kuna Mwari pachikamu chekuti mweya wake waive wakazadzwa nekutenda here kana kuti nekusatenda. (wakazadzwa nehurongwa hwenyama nenzira dzenyama).
Hupenyu hunobva kuna Mwari chete.
Vezvesainzi havakwanisi kusika hupenyu nekuti hupenyu mweya watisingakwanisi kubata saka vesanzi vanokwanisa kushanda chete nezvinhu zvinooneka nekubatika zvakaita semaatomi nesimba rinooneka kana kunzwika. Zvinhu zviri muchikamu chezvemweya zvisingabatiki kana kuonekwa zvinosanganisa zvinhu zvakaita serudo, tariro, mufaro kana kutsamwa, ndangariro, shuwiro, kufunganya nezvimwe zvakadaro.
Hazvikwanisi kuongororwa nenzira yezvinhu zvinobatika nekuonekwa kana kuongororwa nesainzi nekuti zvinhu zviri mupfungwa. Vesainzi vanoziva zvinoti zvikaiswa pazvimbo zvinotipa maatomi uye simba asi havazivi kuti simba racho chii kana kuti atomi racho chii. Zvikuru sei vanoziva here kuti mweya wehupenyu chii!
Saka Mwari vane mitemo yakaoma pamusoro pekugadzirwa kwehupenyu hwevanhu panyika.
Nzira kana kuti misikidzo yekutanga yakaitwa naAdamu naEva. Hukama hwaivepo hwaive wanano.
Ichi ndicho chikamu chichiri kutiyananisa nemunda weEdeni wepamavambo. Wanano yako inoratidza kuti une shuviro dzakaita sei papfungwa yaMwari yeParadiso. Ukaramba nzira yakaiswa naMwari yewanano ukaita yako wega usazoshamisika kuti nei Mwari vakusiya kuti usave chikamu cheParadiso ravo richauya apo achaita denga idzva nenyika itsva.
Chimiro cheEdeni chaive chakadai: Murume aitenderwa kuwana mudzimai mumwechete uyo anofanirwa kuva ari mhandara paanowanikwa. Eva akaita chivi asi murume wake haana kubvira amuramba. Kana muchinge maroorana zviri pamurairo, wanano iyoyo haifanirwi kuzoputswa nechimwe chikonzero zvacho chisiri rufu rweumwechete wenyu, rwemurume kana mudzimai. Murume anokwanisa kurarama asingagari pamwechete nemudzimai wake nekuda kwezvikonzero asi vanenge vachiri pawanano. Hakuna chinhu chinonzi kurambana nekuroora kana kuroorwazve. Kana mukadzi achinge asisiri mhandara paanowanikwa, iye orega kureurura kumurume vasati varoorana, anenge aita chitsidzo chenhema saka chitsidzo chewanano iyi chinenge chisina zvachinoreva. Murume paanoona izvi, kana achida, anokwanisa kumuramba sezvo chitsidzo chenhema hachisunganidzi zviri pamurawo asi kana ave kuwana zvekare anofanirwa kuwana mhandara. Apa anenge asina kuroora kaviri sezvo chitsidzo chekutanga chaive chisina kusungwa pamurairo zvakare kubvira pekutanga vaive vasina kuroorana. Zvisinei, murume anotenderwawo kumuregerera pane zvaakaita kumashure, akazosarudza kugara naye, chitsidzo chewanano yavo chinenge chave pamurairo, chinenge chasungwa sezvo panenge pasisina chivi chakavanzika chingachitadzise kusungika.
Iyi ndiyo mitemo yekutanga pakuunza hupenyu panyika. Ngatiedzei kuitevera muBhaibheri tione kuti nei Mwari akaisa mitemo iyoyo.
Pachikamu chekutanga chewanano nekurambana, ngatitangei kutarisa kuti Mwari akaisa sei hupenyu panyika.
Pakutanga Mwari aifanirwa kusika nyika kuti agokwanisa kuisa hupenyu kupfurikidza vanhu mairi.
Nyika haisingori chinhu chakazvimiririra chega. Inoda rubatsiro kubva kunze, Mwari akasika denga iro ratinoti muchamweya. Muchamweya mune zuva, kuti tiwane chiedza nemudziya uye kuti tizive kuti izuva ripi. Nyika yaidawo mwedzi kuti ugoita kuti zvive nyore kuti gungwa rikwanise kusanganiswa uye kuti tikwanise kuva nemwaka nemwedzi. Nyeredzi dzinotiitawo kuti tikwanise kufamba nemwaka yegore uye zviratidzo (senyeredzi dzakatungamirira vazivi kuenda kuBeterehema kunoona Mwana Jesu (akanga asisiri rusvava) naamai vake pavaive mumba (kwete kuchidyiro kwaaive azvarirwa uyezve Josefa haana kutaurwa nezvake pakasvika vazivi).
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakawana Mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuwira nemura.
Zvishamiso zvemuchadenga zvakadzama zvinoratidza kunaka nekufadza kunoita simba raMwari pamabasa ake ekusika. Kana akasika zvinoshamisa kudai, zvikamu zvemuchadenga zvinoita sezvisingagumi, saka iye amene anokwanisa kufambisa nguva nekureba kwadzo apo dzinokunguruka kusvikira padzinoperera kuhupenyu husingaperi. Mwari ega ndiye anokwanisa kuita hupenyu husingaperi.
ZVAKAZARURWA 10:6 Akapika naiye mupenyu nokusingaperi-peri, wakasika denga nezvirimo, nenyika nezvirimo, negungwa nezvirimo, kuti nguva haingazovipo.:(saka nguva ichaguma).
Asi Mwari anoda kupa vanhu hupenyu husingaperi kuti vagorarama nekusingagumi.
Saka machaputa matatu ekutanga aGenesisi anotiudza kuti Mwari aida kuisa vanhu panyika ovapa hupenyu husingagumi sei. Asi Adamu naEva vakakanganisa hurongwa hwaMwari mumunda weEdeni.
Saka nguva yatiinayo tiri panyika ndeyegadziriro kuti tigogona kunorarama hupenyu husingagumi. Bhaibheri ndiro rega rinokwanisa kutiudza kuti tingagadzirire sei.
Kusika kugadzira chinhu kubva pasina chinhu.
Genesisi chaputa 1 inoshandisa shoko rekuti “kusika” panguva iyi paive pasina chinobatika chakagadzirwa nemaatomi, tichivamba. Mwari Mweya aifanirwa kusika nyika, zuva, mwedzi , mapuraneti, nyeredzi nemagarakisi (zvakadzama zvemunzvimbo matinoti denga).
Akasika denga (nzvimbo dzakadzama) nenyika kubva pasina, nekuti paive pasina maatomi anoonekwa kumavambo kuti akwanise kushandisa.
Shoko rekuti “kusika” ( kugadzira kubva pasina) rakashandiswa katatu muna Genesisi 1.
Sainzi hadzikwanisi kugadzirisa dambudziko rekusika.
Murairo wakakoshesesa wefizikisi ndewekuchengetedza simba uyo unotaura kuti simba harikwanisi kusikwa kana kuparadzwa. Simba rinongokwanisa kubviswa kubva kune chimwe chikamu uchiriisa kune chimwe. Maatomi ari muzuva anonyangadika apo anoshanduka kuva simba nekuti maatomi anonzi isimba rakamanikidzirwa kuti rigare pakanzvimbo kadiki. Kupa kunoita zuva maatomi aya kunoita kuti chikamu chawo (maatomi) chinyangarike. Simba iri rinouya panyika riri chiedza chezuva icho chinobva chatorwa nezvirimwa kana miti kuti igadzire chikafu. Tinodya chikafu ichi toshandisa simba iri kuti tirambe tichirarama. Mhepo yakatipoteredza inotanga kudziya sezvo chikafu chinenge chiri matiri chinenge chave kutanga kushanda.
Hakuna kungagadzirwe simba kubva pasina.
Apa ndipo panorasikira tsananguro yeBig Bang. Kwaive kusina chiro kumavambo. Ipapo chimwe chinhu (hapana anoziva kuti chii) chakabva chaputika simba rese riri panyika rikabva rasikwa. Izvi zvinopikisa kwazvo mutemo wekuchengetedza simba nekuti unoti hakuna simba rinokwanisa kusikwa.
Ivhorusheni ine dambudziko rimwechete irori. Vanoti enzaimu chete ndiro rinokwanisa kugadzira mapurotini. Asi enzaimu rakagadzirwa nepurotini pacharo. Saka enzaimu rekutanga rakagadzirwa nei kana paive pasina purotini?
Kugadzira purotini rimwe harikwani. Purotini rimwe rinoda enzaimu raro saka kuwanda kwemapurotini kuripasi-pasi, parizvino, anowanikwa muchinhu chinorarama anoita 387. Saka maenzaimu 387 akaparadzana anofanirwa kuvapo kuti agadzire mapurotini 387 (tisingataure tumwe tuzvikamu twakawanda tunoita kuti sero rinorarama ringe riripo) kuti tive nechinhu chekutanga chinorarama. Uyezve chichaitei kuti chiwane chikafu?
Hakuna chinhu chakaita se “serowo zvaro”.
Chirwere chegomarara iyezvino vetsvagurudzo vave kuchiti “igomba risina magumo rezvinhu zvakadzama zvisinganzwisisiki) kunyangwe vachiziva zvizhinji pamusoro peDNA racho nezvimwe zvakadaro.
Munoona here kuti zvishoma kwazvo zvatinonzwisisa pamusoro pechinhu chinonzi hupenyu?
Nekuona kuti zvishoma zvatinoziva pamusoro pehupenyu, zvakakosha kuti titeerere mirairo yaMwari yaakaisa pamusoro pekuti hupenyu hunounzwa sei panyika. Iye oga ndiye anonzwisisa zvakadzama zvatisinganzwisisi pamusoro pehupenyu. Mirairo yake yakakosha pakuti tiburitse hupenyu hwakakwanira . Hupenyu hwedu hwakakwanira kana tichinge tagamuchira hupenyu husingagumi nenzvimbo kudenga uye izvi hazvingoitike kunze kwekunge hupenyu hwedu huchienderana neShoko rake. Imwe nzira kuita hako zvaunoda zvinoteverwa nerufu worasika uyezve.......
Bhaibheri harina kutaura kuti Mwari akatora nguva yakareba sei kusika zuva , mwedzi, nyeredzi nenyika. Zvinosara zviri fungidziro kwatiri. “Pakutanga” yaive nguva yakareba sei? Hatizivi.
Asi tinokwanisa kufungidzira kuti akatora nguva yakareba sei kuti aise hupenyu panyika.
GENESISI 1:2 Nyika yakanga isina kugadzirwa, isina chinhu; rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika; Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
Sezvo akanga asika zuva, Mwari akabva asika nyika akaizadza nechando. Akabva afambisa nyika kuti ive pedyo nezuva chando chikatanga kunyunguduka, paifamba dombo guru rechando iri pamusoro penyika, raipara nekukwenga nyika semuvezi anoumba chinhu kubva padombo. Nyika payakange yaita sezvaaida, chando chese chaive chanyungudika nyika yakange yavharwa nemvura. Iyi ndiyo yaive nguva yechando yekutanga (first ice age). Mvura yese yakabuda apa kutsakatika kwayo kwaive kukuru zvekuti mwando wayo wakasimuka zvikuru zvekuti yakaita gore dema rakaita kuti nyika ive yakafukidzwa nerima nekuti gore iri raive ravhara chiedza chezuva. Nyika yaive isina kugadzirwa nekuti yaive izere mvura, mvura haina chimiro paive pasina makomo nenhivi. Pamusoro pemvura pakangoenzana. Mosesi achiona chiratidzo chekusika, akangoona gungwa rakapararira risina zvimwe raingoenda kunosvika kwaikwanisa kuonekwa nameso ake. Asi Mwari aive pabasa. Aifamba pamusoro pemvura pamusoro pembeu dzechinhu chinonzi hupenyu nezvinhu zvaidiwa kuita muviri yezvipenyu zvaizorarama panyika iyo yaakanga aita muvhu, akasika nyika, iyo igere pazasi pemvura yakavhara nzvimbo.
MAPISAREMA 139:14 Ndichakuvongai; nokuti ndakaitwa nemutowo unotyisa unoshamisa; Mabasa enyu anoshamisa, Mweya wangu unozviziva kwazvo.
15 Mapfupa angu akanga asina kuvanzwa kwamuri, panguva yandakaitwa pakavanda, pakuumbwa kwangu nenjere panzvimbo dzezasi dzapasi.
16 Meso enyu akaona muviri wangu uchigere kukwaniswa, zvose zvakanga zvakanyorwa murugwaro rwenyu, zuva rimwe nerimwe rokuvumbwa kwazvo, kusati kwava nechimwe chazvo.
Zvinhu zvose zvinodiwa kuti pave nemuviri wemunhu zvaive panzvimbo dzepasi kubva pamavambo. Midzi yemiti yaizozviunza pamusoro pevhu yoita kuti zvigadzire chikafu. Vanaamai vanenge vakazvitakura vanoita nhomba yekudya chikafu chinoenderana nemwana wavakatakura kuti awane zvakakwana pakuumbwa kwake ari mukati. Mwari anoziva chese chiri mumuviri mako. Anoziva chikafu chese chauchadya. Anoziva kuti chikafu ichocho chichabvepi. Hurongwa hwaMwari uhu hwakaoma hunotokunda pfungwa dzedu.
Bhaibheri harina kushandisa izwi rekuti kusika. Zuva raive rakatosikwa kare. Chiedza chezuva chaive chave kutopenya kare. Kungoti chete nyika yaive yakavharidzirwa kuti isaone zuva negore dema. Izwi raMwari parakataura rakarova nyika rikanyangaritsa gore dema. Zvino nyika yakabva yasangana nechiedza chezuva.
Tose takabva kuvhu.
MUPARIDZI 3:20 Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe;
zvose zinobva pavhu, zvose zvinoendazve kuvhu.
Apa Mwari akaunza nyika pamusoro pemvura kuti iwane simba kubva kuzuva. Hapangavi nehupenyu panyika kana pasina zuva kuti ritipe simba. Ndicho chikonzero nei Mwari akatanga kusika zuva. Zuva raifanirwa kurova panyika miriwo yese nemiti yemichero isati yabudapo kuitira kuti igoshandisa zuva kugadzira chikafu. Kumashure kwaizvozvo ndipo paizokwanisawo mhuka nevanhu kuvapo kuti zvigowana chekudya kubva kumiti.
Setsananguro yekutifananidza nepamavambo: takabarirwa muzvivi nerima rekusatenda kwedu rakatiputira kuti tisaone chokwadi. Panotaura Mwari nemoyo yedu panguva yekutsiura kutadza kwedu, kusatenda kwedu kunombobva toona chiedza chaMwari, totenda kuBhaibheri Shoko rake, towana kupona.
Vezvesainzi vanobvuma kuti vanoziva zvizhinji pamusoro pechiedza asi havanzwisisi kuti chimbori chii. Kusaziva kwedu pamusoro pechiedza nhasi uno kunotivharidzira kuti tisaone chakavanzika chacho chakadzama.
Kana tisinganzwisisi chiedza chatinoona mazuva ese, chaive nhanho yekutanga pakuunza hupenyu panyika, hatitombofanirwi kusaterera murairo uri muBhaibheri, nekuti ndiwo chiedza cheMweya chinotitungamirira kuhupenyu husingagumi.
GENESISI 1:4 Mwari akaona chiedza kuti chakanaka; Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.
Chiedza chinomiririra Shoko kuti ritionese nzira. Rima rinomiririra kusateerera Shoko toita zvedu zvatinoda. Saka hatikwanisi kutevera Mwari (Shoko) kana tichitadza kutevera Shoko maererano nechisungo chewanano nezvimwe zvose.
GENESISI 1:5 Mwari akatumidza chiedza; akati Masikati, nerima akaritumidza, akati Vusiku, madeko akavapo, namangwanani akavapo, nezuva rimwe.
Zuva rekutanga iri raive rakareba zvakaita sei? Kwatiri isu vanhu venyama zuva redu maawa 24. Asi pazuva rekutanga kwaive kusati kwave nemunhu. Mwari ega ndiye aivepo, saka ngatitii izuva rimwechete raMwari.
11 PETRO 3:8 Asi vadikanwa, musakanganwe chinhu chimwechete ichi, kuti kunaShe zuva rimwe rakaita semakore ane churu, nemakore ane churu sezuva rimwe.
Mwari anoona zuva semakore 1 000. Mwari aisafanira kutora makore 1 000. akasarudza kutora makore 1 000.
Saka svondo raMwari rekusika remazuva manomwe rinoreva kuti Mwari akatora makore 6 000 achiisa hupenyu panyika. Zvino Mwari aizosiya mwanakomana waMwari, Adamu, nemukadzi wake kuti vatonge nyika pazuva rechinomwe raizova makore 1 000. Adamu nemukadzi wake vakaita chivi pakati pemakore 1 000 iwayo ezuva rechinomwe.
(Nekuti vaive vasikirwa muParadiso zvaive zvisingatarisiriki kuti vaizova nechido chekuita chivi pakati pemaawa 24 kunyanya nekunge Adamu aifanira kuzopa mhuka dzose mazita pakanguvana ikako. Aifanirwa zvekare kudzidza kuti aizotarira sei munda weEdeni). Saka zuva rechinomwe harina kuzopedziswa. Saka Mwari akaita makore 6 000 achisika Paradiso, munda weEdeni. Satani akabva atorera ipapo nyika yakatukwa nezvivi iyo yaakatotonga kwemakore 6 000 muhondo dzayo, ruvengo, kuzvitutumadza, makaro, matambudziko, marwadzo, rufu, nzara, hurombo, zvirwere, zvinodhaka, nekuchema kukuru izvo zvakabereka edeni yanhasiuno yaSatani. Zuva richauya apo Mwari achauya kuzoparadza zvakaipa pahondo yeAmagedhoni. Mumashure maizvozvo Jesu, Mwanakomana waMwari, nemwenga wake (chechi yechokwadi) vachatonga nyika kwemakore 1 000 ( muMereniyamu) vachizadzisa zuva rechinomwe rakakanganiswa nechivi.
Zuva raiveko asi zvirimwa nemhuka zvaida mweya wemuchadenga (nzvimbo) ine mweya wakanaka wekufema weokisijeni uyewo mweya unodiwa nemiti mweya wekabhoni dhayokisaidhi kuti ikwanise kugadzira chekudya kubva kwauri.
GENESISI 1:6 Mwari akati: Nzvimbo ngaivepo pakati pemvura kuti iparadzanise mvura nemvura.
7 Mwari akaiti nzvimbo, akaparadzanisa mvura yakanga iri pasi penzvimbo, nemvura yakanga iri pamusoro penzvimbo; zvikaita saizvozvo.
Nzvimbo yaive nemvura dzegungwa pasi payo sezvo zvinhu zvinogadzira mvura zviri gasi rehydrojeni neokisijeni, Mwari akatora mvura yakanga iri pamusoro penzvimbo akaiita hydrojeni neokisijeni zvakazogadzira chikamu chinotichengetedza kubva kuzvikamu zvezuva zvinokuvadza zvakaita semareyi ealtiravayoreti nezvimwewo. Mwari anokwanisa kusanganisa zvekare chikamu chehaidrojeni neokisijeni ichi kuchiita mvura oyinayisa panguva yemvura yaNoah. Kumashure kwemvura yaNoah mazera evanhu akatanga kudzikira zvakanyanya, vakatanga kufa vari vadiki.
GENESISI 1:8 Mwari akatumidza nzvimbo, akati Denga. Madeko akavapo namangwanani akavapo, zuva repiri.
Nzvimbo iri pamusoro pedu inonzi Denga sezvo takajaira kuti denga riri pamusoro pedu. Nzvimbo idenga rakasikwa rinomiririra Denga rechokwadi rezvemweya riri pamusoro pedu papfungwa yekuti riri panzvimbo dzepamusoro-soro.
Nzvimbo idenga ratinoona kana dziri nguva dzemasikati. Zuva ndiro rinenge richitonga mudenga iroro. Nezuva rimwechete richitonga denga, tinofanira kuziva kuti kuna Mwari umwechete anotonga muDenga rezvemweya.
Nzvimbo dzakadzama idenga ratinoona husiku tinoriziva nemwedzi nenyeredzi.
Zvino mhepo yenzvimbo yakange yavepo kuti zvinhu zvinorarama zvikwanise kufema uye kuti miti nemiriwo ikwanise kugadzira chekudya.
GENESISI 1:9 Mwari akati: mvura iri pasi pedenga ngaiungane pamwechete, kuti pasi pakaoma paonekwe.
10 Mwari akatumidza pasi pakaoma, akati Nyika; nemvura yakaungana akaitumidza, akati Makungwa; Mwari akaona kuti zvakanaka.
Mwari muparadzanisi. Kereke inozivikanwa se “vakadanwa” (ekklesia) akaparadzanisa chiedza kubva kurima. Apa asimudza nyika pamusoro pemvura kuparadzanisa mvura nevhu.
Ivhu chiratidzo chevakarurama. Gungwa rinomiririra marudzi asina kugadzikika anotsvairwa nemweya yakaipa munezvematongerwo enyika, kupara mhosva, huwori, mimhanzi yemunyika, mifananidzo yevanhu vakashama, zvinodhaka, hupombwe, makaro, kuzvitutumadza nezvimwewo.
ZVAKAZARURWA 13:1 Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa, chinenyanga dzinegumi nemisoro minomwe; napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzinegumi, napamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari.
Johane, chiratidzo chemutendi akarurama, akamira panhivi dzegungwa (ivhu) chikara chinova simba rewakaipa, chakakwira kubva mugugwa risina kugadzikika zvichireva kuti kubva muvanhu vazhinji.
ZVAKAZARURWA 17:15 Zvino akati kwandiri: mvura yawaona inogarwa nemhombwe, ndivo vanhu, navazhinji namarudzi nendimi.
Mhombwe yaive yakagara pachikara chakakwira chichibva mumvura.
Saka gungwa rakaita chiratidzo chekukanganisa, apo ivhu chiratidzo chevakarurama.
Vaapostora vakaitwa varedzi vevanhu. Kubvisa hove mugungwa vachidziunza kuivhu uko kwadzinosvikofa chiratidzo cheEvangeri richiraura vanhu vazere zvivi kubva muhupenyu hwezvivi richivaunza kuMuponesi akarurama pavanofa kuzvivi vowana hupenyu husingaperi kuna Kristu.
Apa yaive yave nguva yembeu kuti itange kumera kuti ikurire muchiedza chezuva. Nguva yehupenyu hwekutanga hwembesa kuti huwonekwe.
GENESISI 1:11 Mwari akati: Nyika ngaimerese uswa nemiriwo inobereka mbeu, nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo.
“Nyika ngaimerese”. Mbeu dzezvinomera dzaive dzatosikwa kare pakutanga. Apa mamiriro ekunze aive ave kutendera kuti zvinomera zvimere zvikure. Chinhu chakakosha apa muti unoita michero. Miti ndiyo inorarama nguva yakareba pazvinhu zvese zvinorarama. Muti webristukoni kuAmerica wakaonekwa kuti wakararama kusvika kumakore 4 500. Saka muti chinhu chakanaka kuti chishandiswe sechiratidzo chehupenyu husingaperi. Mwari, anova hupenyu husingaperi, anozviratidza seMuti weHupenyu mumunda weEdeni.
Hazvishamisi kuti nei Jesu achikura aibatsira Josefa mumabasa ake ekuveza, achishanda achikwenenzvera mapuranga akabva pamiti kugadzira midziyo inoshandiswa nevanhu mukurarama.
Tarisai kuti Mwari akaitei nemiti yakararama kwenguva refu iyi. Yakabereka michero yaitove nemhodzi yehupenyu hutsva mukati mayo. Izvi zvinomiririrei?
Vanhu vakaberekwa vari nehupenyu asi haurarami kwenguva refu, kazhinji vanosvika kumakore 70. Tinozongowana hupenyu husingaperi mushure mekuzvarwa patsva kana tikatendeuka, tobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu tozogamuchira Mweya Mutsvene, unova hupenyu husingaperi.
MABASA AVAPOSTORA 2:38 Petro akati kwavari: Tendevukai, mumwe nemumwe wenyu abhapatidzwe nezita raJesu, kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa cheMweya Mutsvene.
Asi muti wemuchero, sezvo tichishandisa miti inorarama kwenguva refu sechiratidzo chehupenyu husingagumi, inoita zvinhu nenzira yakasiyana.
Muti wemuchero unobereka muchero une mhodzi yawo kare mukati mawo. Izvi zvinorevei?
RUKA 1:42 Akadana nezwi guru, akati: Wakaropafadzwa iwe pakati pavakadzi, nechibereko chedumbu rako chakaropafadzwa!
Uyu ndiErizabetha aitaura naMaria. Saka Maria, saamai, ndiye aive muti wemuchero. Muchero wechibereko chake aive Mwana Jesu.
Hupenyu husingagumi hunouya kubva kumwana anoberekwa aine Shoko raMwari maari.
JOHANE 1:14 Shoko rakazova nyama; rikagara pakati pedu, (tikawona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwechete waBaba,) azere nenyasha nezvokwadi.
Vazivi vakauya kuzomunamata nekuti Mwari airarama muMwana mutsvene uyu.
MATEO 2:11 Vakapinda mumba, vakaona Mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata, vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira nemura.
Zuva rechina rinosiya vazhinji tiine fungidziro zhinji nekuti pakusika muchikamu ichi havana kujekesa musiyano uripo pakati “pekusika” “nekugadzira”.
Mwari aive atopedza kusika denga pavhesi 1, saka zuva nemwedzi zvaiva zvatovapo.
Pasina chiedza chezuva, zvinomera zvakavapo zuva rechitatu zvingadai zvisina kukura.
Izwi rekuti “kuita” rinoreva zvakasiyana asi ngatimashandisei ese ari maviri.
Unokwanisa kuita chimwe chinhu kubva pane chimwe chinhu chagara chiripo, sekugadzira tafura kubva papuranga rabva pamuti kana kugadzira rambi kubva pabhodhoro kana gaba. Kana kuti unokwanisa kuita chimwe chinhu kuti chiite chimwe chinhu. Unokwanisa kuita tafura kuti imire senzvimbo yekuisa ndiro kana kuti yekudyira, kana kuti unokwanisa kuita rambi kuti rimire sechiratidzo kune vanofamba nemumvura kuti rigare muimba yemwenje (lighthouse).
Pazuva rechina, Mwari akaita kuti zuva nemwedzi zviite mabasa azvo akafanira anova ekutonga pazuva nehusiku kupfurikidza kupa mwenje. Nyeredzi dzakaisirwa kupa zviratidzo.
GENESISI 1:16 Mwari akaita zviedza zvikuru zviviri; chiedza chikuru kuti chibate vushe masikati, nechiedza chiduku, kuti chibate vushe usiku, nenyeredzi.
RUKA 21:25 Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi napanyeredzi; napanyika hurombo hwavanhu, vachikanganiswa nekutinhira kwegungwa namafungu.
Nyeredzi dzakamiririra kuva zviratidzo mudenga. Mwari akaita nyeredzi kuti dzitore chimwe chikamu zvekuti kana dzichionekwa chikwata chadzo chinova nechimiro chadzinenge dziinadzo. Semuenzaniso, kana uchida kuwana nzira kuchikamu chekuchamhembe chenyika unofanira kutarisa kumuchinjiko wenyeredzi shanu dzekuchamhembe kubva pamuchinjiko uyu wotsvaga kuti kuchamhembe ndekupi. Pamweya nzira iri nyore kuwana nayo nzira kutarisa pamuchinjiko pakarovererwa jesu nekuda kwezvivi zvedu.
Vakamupa mavanga patsoka dzake mbiri, nemaoko maviri neparutivi kumaita maronda mashanu vachishandisa dare rakapinza (zvakamiririrwa nenyeredzi shanu). Dare chaive chiratidzo cheRome pachiratidzo chaDanieri chemuHedeni. MaRoma ndivo vakamurovera. Kune dzimwe nyeredzi mbiri zvakare mudenga dziri pedyo dzakanongedzera muchinjiko wekuchamhembe dzinodaidzwa kunzi minongedzo. Muchikamu chezvemweya, Testamente yekare neTestamente itsva ndiyo minongedzo miviri inopenya inonongedzera paCalvari nekukunda rufu kwaJesu.
GENESISI 1:17 Mwari akazviisa pasi penzvimbo yedenga, kuti zivhenekere panyika,
18 zvibate ushe masikati nousiku, nekuparadzanisa chiedza nerima; Mwari akaona kuti zvakanaka.
19 Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva rechina.
Zuva nemwedzi hazvingopi chiedza chete panyika asi zvine zvimwe zvinhu zvakakosha zvazvinoita pahupenyu huri panyika.
Pazuva rechina rekusika hupenyu panyika, Mwari akaisa nyika panzvimbo payo chaipo, uye nechinhambwe chakafanira kubva kuzuva, Mwari akaita kuti nyika itenderere nekumhanya kwakakodzera kwekuita zuva rine maawa 24. Tinofanirwa kuva tiri pachinzvimbo chekuva pamakiromita 150 miriyoni kubva pazuva kuitira kuti tisatsve zvakanyanya kana kutonhorwa zvakanyanya. Dai chinhambwe ichi chaive chidiki, pangadai pasina nguva inokwana yekuibvisa zvirimwa muzhizha uye dai paive nechinhambwe chakakurisa, nguva yechando yairebesa saka kwaizoshaikwa chikafu chakakwana chekuti tipedze nguva yechando tichidya. Dai nyika yaitenderera nekukasika zvakanyanya zuva raizova pfupi uye taisazowana mudziya wakakwana. Dai nyika yaitendererawo zvishoma dai zuva rairebesa uye taitsva zvakanyanya. Saka Mwari akatoita dzoreredzo yakasimba pakumisikidza chinhambwe chiri pakati penyika nezuva uye pakumhanya kunoita nyika kana ichitenderera. Apa ndipo pakaita kuti zuva ritonge masikati uye hupenyu huendeke.
Nyika yaifanirwawo kuva chinhambwe chakafanira kubva kumwedzi kuitira kuti kukweva kunoita mwedzi kukwanise kusanganisa kukwira nekudzika kwegungwa uko kunobatsira kusimudza manyutirienzi mugungwa. Dai mwedzi waive pedyo zvakanyanya kusimuka nekudzika kwegugwa kwaizokukura mhenderekedzo dzegungwa. Dai waive kure zvakanyanya gungwa raizoita mvura inenge ingori panzvimbo imwechete inozopedzisira yanhuwa nekushaiwa chinorisanganisa zvakakwana. Mwedzi unofanirawo kuva uri chinhambwe chakafanira kuitira kuti utenderere kanoita ka12 uchimhanya kudarika kwatinoita zuva kuitira kuti tive nemwedzi inoita 12 pagore. Mwedzi unofanira kutsakatika wozotangazve kukura zvishoma nezvishoma kuitira kuti utionese mwedzi yegore nemimwe mitambo yatinofanirwa kuita yakaita sepasiovha. Saka zvinotora dzoreredzo ine hungwaru zvikuru mwedzi usati wave panzvimbo yakafanira kuitira kuti ugotonga usiku wotipa chiedza chekuratidzira kana kwasviba.
Zuva rechina rakaona kuiswa kwenyika panzvimbo yakafanira kuti zuva rigotonga masikati uye kuti mwedzi ugotongawo usiku.
Zuva rechishanu rakaona mhando mbiri dzehupenyu dzichisikwa. Zvese izvi hazvina kuisirwa muganhu pakurarama pamusoro pevhu. Shiri dzinobhururuka mudenga pasina kumanikidzika kwakanyanyisa kwemhepo uye kana kuchioneka zviri nani. Dzine mapapiro akareruka anoshamisa ayo ekuti munhu haakwanisi kuedza kutevedzera kumaita, akakosha kwadziri. Hove dzinotuhwina mugungwa umo mune kumanikidzika kwemweya kwakanyanya okisijeni yemo inonyunguduka mumvura. Saka ndudzi mbiri dzezvipenyu zvaifanirwa kusikwa kuti zvirarame mumamiriro akasiyana aya.
GENESISI 1:20 Mwari akati: Mvura ngaigare nezvipenyu zvizhinji, neshiri dzibhururuke pamusoro penyika munzvimbo yedenga.
21 Mwari akasika mhuka huru dzegungwa, nezvipenyu zvese zvinokambaira, izvo mvura yakanga izere nazvo, zvina marudzi azvo, neshiri dzose dzina mapapiro, dzina marudzi adzo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
22 Mwari akazviropafadza, akati: Berekai muwande, muzadze mvura iri mumakungwa; neshiri ngadziwande panyika.
23 Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva reshanu.
Hove neshiri ndizvo zvakaita zvipenyu zvekutanga kusikwa pazvipenyu zvepanyika zvaifanira kuwanda kupfurikidza kusangana pabonde kusvikira zvazadza nyika, mumashure mezvo Mwari aikwanisa kuzobvisa kuda kwazvo kusangana sezvo zvinorarama kupfurikidza nekuda kwekuzvarwa kurimo kwete nekuda kwekuzvifungira.
Zuva rechitanhatu rakasikwa mhuka dzinorarama panyika.
GENESISI 1:24 Mwari akati: Nyika ngaibereke zvipenyu zvinamarudzi azvo, nezvipfuyo, nezvinokambaira, nemhuka dzenyika, zvina marudzi azvo; zvikaita saizvozvo.
25 Mwari akaita mhuka dzenyika dzina marudzi adzo, nezvipfuyo zvina marudzi azvo , nezvinhu zvose zvinokambaira zvina marudzi azvo; Mwari akaona kuti zvakanaka.
Kusika kubva pasina kwaisaita nekuti zvipenyu semiviri yemhuka dzenyika zvaive zakatoiswa kare muguruva. Mwari akangotora zvinhu izvi kubva kuguruva akaita zvipenyu. Saka akaita zvipenyu zinogara panyika kubva kuguruva akazvifemera mweya wehupenyu.
Mwari akabva azouya kumunhu akada kuratidza kuti munhu ndiye aizova chisikwa chekorona pazvisikwa zvese.
GENESISI 1:26 Mwari akati; Ngatisike munhu nemufananidzo wedu, akafanana nesu ; ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipfuwo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
Dura mazwi rinodudzira izwi rekuti “kuita” richiti zvinoreva kuti “kukwanisa” kana kuti “kusvika pachidanho”. (Semuenzaniso kuita budiriro) aida kuti munhu ave mutariri wezvisikwa zvake. Akatora nguva yake pakusika munhu pachinzvimbo chekungo sikawo kwaakaita zvimwe zvese. Kutora nguva yake achinyatsofunga masikiro aaiita munhu aizopa munhu chiremerera nerukudzo. Mwari akaita zano rekuti munhu aizova mufananidzo wake iye Mwari. Hakwaizova nekumwe kuyemurwa kwaizosvika pane kwemunhu.
“Ngatiite” ngati anoshandiswa nemadzimambo, maPope, makadhinari, nemaBhishopu.
EZRA 4:11 Ndiwo mashoko emwadhi yavakatuma kuna mambo Aritashasita, varanda venyu, ivo varume vari mhiri kworwizi namamwe, mashoko akadai.
18 Mwadhi yamakatitumira, ndairavirwa zvakanaka.
Izvi zinoonekwa sehuwandu hwamambo. Hakuna shoko rimwe rinogona kunyatsotsanangura zvakaita Mwari. Zvakanaka zvake zvakawandisa.
Mufananidzo waMwari chii?
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya;
Saka mufananidzo weMweya usina muganhu kana magumo unofanira kuva umwe Mweya, mudiki kune uyu.
Muviri waAdamu waizogadzirwa kubva kuguruva waisazoda kusikwa kubva pasina. Asi kumashure kwekutora nguva yake Mwari akazosarudza kusika munhu pamweya aizova mufananidzo waMwari une miganhu, mufananidzo weMweya waMwari pachake. Zvimwe zvose zvakasikwa zvaionekwa kana kubatika asi munhu aive nemutowo unoshamisa. Aive akafanana naMwari zvekuti aive akangosikwa ari mweya.
Mwari anoona kereke yake yechokwadi seMwenga wake. Mweya wevanhu vanozoita Mwenga wake wakagara uri Maari.
JOBO 38:4 Iwe wakange uripiko panguva yandakateya nheyo dzenyika? Chidudzira, kana une zivo iwe.
7 Panguva yakaimba nyeredzi dzamambakwedza pamawa, uye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nomufaro?
Mwari paakasika nyika, vanakomana vaMwari (kereke yake yaizouya) vaive maari vachipembera, kunyange vasisarangarira havo. Kana nyika, musha wavo waizouya, waizosikwa vaizoziva kuti yaive nguva shoma vasati vatanga kurarama mumiviri yevanhu vave panyika.
Kumashure kwehondo yemadzimambo, Abrahama, mukundi, akapa chegumi kuna Merkizedeki uyo aive Mwari achifamba ari mumuviri wemunhu waaive azvisikira.
VAHEBERU 7:4 Zvino fungai kukukura kwemunhu uyu, wakapiwa natateguru Abrahama chegumi chezvaakapamba.
9 Zvino tingati naRevhi, unopiwa zvegumi, iye vo akapa zvegumi kuna Abrahama;
Revi aive mwanakomana waJakobo uyo aive mwanakomana waIsaka mwanakomana waAbrahama. Revi semuzukuru mwana wemwana waAbrahama aive chikamu chidiki-diki chehupenyu hwembeu yaAbrahama asi aikudza zvikuru tsika iyi yekupa chegumi zvekuti paakazorarama panyama semunhu, Mwari akamutendera kutambira chegumi kubva kuvanhu.
Mwenga waMwari akagara ari maari kubvira kare kare kaungafunga nezvako.
Saka Mwari akasika mweya waive wakarerekera kuva munhu wainzi Adamu mukati memweya uyu maive nezvikamu zvaizoita mwenga waAdamu.
GENESISI 5:1 Ndiro bhuku ramarudzi aAdamu. Musi waakasika munhu, Mwari wakamuita nemufananidzo waMwari;
Kusika zvinoreva mweya wakaitwa kubva pasina chinhu chinooneka kana kubatika.
GENESISI 5:2 Wakavasika murume nomukadzi; akavaropafadza akavatumidza zita rinonzi Munhu, musi wavakasikwa.
Uyu waive munhu wemweya, akasikwa nemweya wakarerekera kumunhu wenyama asi uine maitiro echidzimai mauri.
Mwenga waKristu waive maari paaifamba panyika. Pamakore 2 000 enhoroondo yemakereke mwenga achararama sevanhu vakasiyana-siyana mumiviri yakasiyana inoonekwa.
Saka mweya waisaonekwa wemunhu ainzi Adamu waive panyika uchikwanisa kutaurirana neMweya waMwari.
SeMweya, Adamu aisakura kana kuchembera.
Asi vanhu vaizowanda sei? Mhuka dzaioneka nekubatika saka dzaiwanda kupfurikidza kusangana kwehadzi nemukono kusvikira dzazadza nyika apa Mwari aizobvisa kuda kusangana kubva pamhuka. Mhuka hadzi hadzina chido nekusangana kusvikira kanguvana kadzinenge dzichipanda dzoenda nemukono kusvikira dzabata mimba. Kuda kusangana uku kunobva kwabviswa zvakare. Kuberekana kwemhuka kunouya nenguva yako kwete nekuda kana nekuronga.
Asi zano iri harishande kuvanhu, vanoita nekuziva, nekuda nekuzvirongera. Kana munhu aine mukana wekuzvirongera rudo rwake rwezvepabonde harwubvisiki saka vanokwanisa kuenda pabonde chero nguva dzavanenge vachida. Saka hakuzove nemagumo ekuberekana kuvanhu saka nyika inozoita vanhu vakawandisa pane zvayaifanira kuita. Mugore 1804 paive nevanhu vaisvika 1 biriyoni panyika . Muna 1927 vanhu vaive vasvika 2 biriyoni saka huwandu hwevanhu hwakatora makore 120 kuti huwedzere nevanhu 1 biriyoni. Iye zvino panongoda makore 12 kuti vanhu vawedzere ne 1 biriyoni. Muna 2012 paive nevanhu 7 biriyoni panyika saka chokwadi ndechekuti nyika haikwanisi kuramba ichichengeta huwandu hwevanhu hwakadai kwenguva refu.
Parinhasi hafu yehuwandu hwevanhu iri kugara mumaguta.
Vanhu vawandisa vari kugara mumaguta nhasi pane zvaive huwandu hwevanhu pasi rese apo John F kennedy paakasarudzwa kuti ave mutungamiri weAmerica muna 1960.
Kukura kuri kuita huwandu hwedzimba dzematangwena kana dzakasaririra mumaguta kubva kumakore a1960 kwave kutotyisa. Panzvimbo dzakadai ndipo zvakare pari kuwanikwa pachikurira huwandu hwevanhu kubva kumakore zana adarika. Vanhu 1 biriyoni vari kugara mumatangwena anosvika 200 000 zvichireva kuti hurombo huchatoramba huchiwedzera. Kuwanda kupfurikidza kusangana pabonde kwaive kusiri chikamu chehurongwa hwaMwari kuvanhu asi yangova nzira yekuwedzera kushupika.
Nyika haisisina zvakakwana kuti ipe vanhu varikuwedzera zvakanyanya ava hupenyu hwakanaka. Sainzi netekinoroji zviri kumboedza kuti zvinhu zviite nani asi nevanhu 80 miriyoni vari kuzvarwa panyika gore rega rega, dambudziko rekuedza kuwanisa munhu wese riri kuramba richioma.
Saka hurongwa hwaMwari hwekutanga hwaive hwei?
Hazviiti kuti hupenyu husingagumi hupfuurire kupfurikidza kusangana pabonde.
Kusangana pabonde ndiwo muti wekuziva chakanaka nechakaipa. Rinoburitsa vanhu vanotambira Kristu seMuponesi wavo, nevamwewo vanoramba Kristu, vanova vakaipa. Kuita kwevanhu kushoma kwacho kwakanaka uye kwakaipa. Sebonde rakadaro, rakanaka kana rikaitwa kana vanhu varoorana uye rakaipa kana rikaitwa vasati varoorana . Rakanaka muwanano rakaipa kunze kwewanano.
GENESISI 1:28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati kwavari: Berekai muwande muzadze nyika; mubate ushe pairi; muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
Mwari paakataura izvi kwavari, Adamu aive achiri munhu wemweya. Mwari aitaurawo nezvehupenyu husingagumi. Adamu nehunhu hwechikadzi hwaive maari aizokwanisa kubereka vanhu vaizova nehupenyu husingagumi. Rufu rwakauya nekuda kwechivi. Chivi chisati chaitwa kwaive kusina rufu. Vanhu vangasvike sei panyika vane hupenyu husingagumi? Ndizvo zvairehwa nekuwanda kupfurikidza nemweya.
Mhinduro igere pashoko rekuti berekai. Muti wemichero unoita michero ine mhodzi yehupenyu mairi.
Saka Mwari aizoisa Adamu mumuviri wemunhu zvakazoitika kuna Genesisi Chitsauko 2. Apa aizoparadzanisa mweya wechidzimai kuuitira muviri wemunhukadzi . Mweya Mutsvene waizozadza mudzimai uyu anova mhandara ( muti wemuchero) uyo aizobatsirwa Mwana Jesu (mbeu yechibereko). Jesu aizova nekuzara kweShoko raMwari maari. Shoko ndiro mbeu yehupenyu husingaperi. Jesu aizokura abva zera , sezvo kwaive kusina chivi chekufira, Aizotaura vatsvene vake vese kubva muguruva renyika ozadza nyika nehuwandu hwevanhu hwakafanira vanenge vakazadzwa neMweya Mutsvene , vane hupenyu husingaperi. Kungadai kusina vaizotsvira mugehena. Pangadai pasina kuzarisa kwenyika ine miganhu.
GENESISI 2:7 Jehova Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake; munhu akava mweya mupenyu.
Mwari akaita muviri wenyama kubva paguruva. Muviri uyu hauna kusikwa kubva pasina. Mwari akabva afuridzira mweya waAdamu mumuviri uyu. Zvino Adamu akatanga kurarama mumuviri wemunhu uye aizorarama panyika. Kana mweya wemunhu wave mumuviri tinoti munhu ave kurarama.
GENESISI 2:9 JEHOVA Mwari akameresa pasi miti yese inofadza meso, neyakanaka kudya; uye muti wehupenyu pakati pemunda, nomuti wokuziva zvakanaka nezvakaipa
Kuna Genesisi 1 Adamu aive munhu wemweya aisakwanisa kunyengereka. Saka miti yese yaive yakanaka asi zvino aive aiswa mumuviri wenyama aifanira kuva akachenjerera kuti asaite chivi. Chitsauko 2 ndipo pakatangira kutaurwa nezvechakaipa.
MATEO 26:41 Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuedzwa, mweya unoda hawo asi nyama haine simba.
Muti weHupenyu waive usiri muti seimwe miti. Hakuna muti unokwanisa kupa munhu hupenyu husingaperi.
GENESISI 3:22 Zvino JEHOVA Mwari akati, Tarirai, munhu ave semumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa; zvino zvimwe angatambanudze ruoko rwake, akatorawo zvomuti woupenyu akadya, akararama nekusingaperi.
Muti weupenyu waikwanisa kupa Adamu hupenyu husingaperi.
Saka Muti weHupenyu waive Mweya waJesu Kristu.
1 JOHANE 5:11 Kupupura ndiko, kuti Mwari wakatipa vupenyu husingaperi; zvino vupenyu uhwu huri muMwanakomana wake.
Hakuna matsime maviri atingawane hupenyu husingaperi. Jesu Kristu ega ndiye tsime.
Muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa ndiye Satani. Bonde rinozivikanwa seruzivo rwekusagana kwemurume nemudzimai,
Adamu nemukadzi wake pavakange vave mumuviri miviri yakasiyana Satani akakwanisa kuvanyengera kuti vaunze hupenyu panyika nenzira yaishandiswa nemhuka. Uku kuwanda kwenyama kwete kweMweya. Kwakaunza hupenyu asi hwemunhu anofa.
GENESISI 2:17 Asi muti wekuziva zakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi wauchaudya, uchafa zvirokwazvo.
Ukaunza hupenyu kupfurikidza bonde uchafa. Hakuna munhu akauya panyika kupfurikidza bonde angararame zuva rimwechete remazuva aMwari rinova makore 1 000.
GENESISI 2:18 JEHOVA Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga; ndichamuitira mubatsiri akamufanira.
Apo Adamu aive munhu wemweya kuchaputa 1 zvaive zvakanaka nekuti aive nemweya wemukadzi mukati maari. Asi zvino paave mumuviri wemunhurume zvaive zvisisina kufanira kuti ave nemweya wechikadzi maari . Saka Mwari akatora mweya wechikadzi uyu akauisa mumuviri wakasiyana, muviri wemukadzi.
GENESISI 2:25 Vose vari vaviri vaive vasina kusimira, mumhu nemukadzi wake, asi havana kunyara.
Vose vaive vasina kusimira asi havana kuzviziva. Vaive vakapfekedzwa hutsvene nekuti Mwari aisada kuti vaite zvebonde. Nekuda kwei? Aida kuti mukadzi waAdamu ave ari mhandara kuitira kuti agobereka Mwana anoberekwa nemhandara Mwana Jesu.
GENESISI 2:17 Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchafa zvirokwazvo.
Kudya kunokwanisa kumiririra bonde nekuti kana uchidya unoisa chikafu mudumbu bondewo rinoita kuti dumbu remudzimai rikure kana abata pamuviri.
ZVIREVO 30:20 Ndizvo zvakaita kufamba kwemukadzi weupombwe, anodya, ndokupisika muromo wake, achiti, handina kuita chinhu chakaipa.
GENESISI 4:1 Zvino Adamu wakaziva mukadzi wake Eva: iye ndokutora mimba akapona Kaini, akati ndawana munhu, ndichibatsirwa naJehova.
“wakaziva” kuziva zvitsverudzi kana kusangana, kuziva zvebonde.
Adamu naEva vakaunza hupenyu kupfurikidza bonde. Chiitiko chimwechete chakaita kuti pazvarwe mapatya.
Eva akati haana chakaipa chaaive aita, “ndawana munhu kubva kuna JEHOVA.
GENESISI 4:2 Akazoponazve munun'una wake Abero. Abero akanga ari mufudzi wamakwai, Kaini akanga ari murimi wevhu.
Mwana wechipiri pamapatya akazvarwa.
Chakakanganiswa naEva chikuru chaive chii. Paive pasisina mhandara yaizobereka Mwana Jesu.
Saka munhu wese aizozvarwa aizozvarwa kupfurikidza bonde kunze kwemunhu mumwechete, Jesu.
Asi Mwari aizomirira makore 4 000 izvi zvisati zvaitika. Mwari aizomirira zvakare makore 2 000 Jesu asati ataura vatsvene vake vose kuti vabude muguruva kuti agadzire Mwenga wake paKuuya Kwake kwechipiri. Asi hurongwa hwaMwari hwepamavambo huchaitika pakupedzisira.
Nekuti Adamu naEva vakatevera mutemo wekuwanda waive wemhuka uyo unoita mukono mumwechete nehadzi zhinji paboka, Mwari akaita kuti vanhu vatevere nzira imwechete iyi yebarika panguva yeTestamente yekare. Asi Jesu akazouya kuzotidzosera panzira yepakutanga yemubindu reEdeni , murume mumwechete nemukadzi mumwechete.
MATEO 19: 4 Akapindura, akati: Hamuna kurava here, kuti uyo akavasika pakutanga, wakavaita murume nemukadzi?
5 Akati: Nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba vake naamai vake, akanamatira mukadzi wake; ava vaviri vachava nyama imwe.
6 nokudaro havachiri vaviri, asi nyama imwe. Zvino, izvo Mwari zvaakasanganisa munhu ngaarege kuzviparadzanisa.
7 Vakati kwaari: Mosesi wakagoraireiko kuti murume amupe rugwaro rwokurambana, agomurasha?
8 Akati kwavari : Nokuda kwovukukutu hwemoyo yenyu Mosesi wakakutenderai kurasha vakadzi venyu , asi kubva pakutanga zvakanga zvisina kudai.
Kurambana inhau dzakaipa . Hakuna nzvimbo muhuronga hwaMwari hwemuEdeni hwekutanga. Kuramba zvinoreva kurasha.
MARAKI 2: 16 Nokuti ndinovenga kurambana ndizvo zvinotaura JEHOVA, Mwari waIsraeri uye munhu unofukidza nguvo yake nokumanikidza ndizvo zvinotaura JEHOVA wehondo; saka chenjererai mweya yenyu, kuti murege kunyengera.
Tese tinofanira kuva tichishingirira kuti tive sepamavambo. Vakadzi vanofanira kukoshesa kuva mhandara kusvikira pavanowanikwa. Mudzimai wekutanga asisiri mhandara, akava musuwo wakazarurwa kutendera chivi kupinda . Nhasi uno tichiri kungofa nekuti takazvarwa kupfurikidza bonde uye kuzvara mwana kuchiri kungorwadza, izvi zviripo kuti tione kuti Mwari haana kukanganwa kana kushandura pfungwa dzake panyaya iyi.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati , ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako, uchabereka vana uchirwadziwa: kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako.
Mukadzi wekutanga akasarudza nzira yakaipa yekuunza hupenyu hwevanhu, nekutambudzika pakuzvara iyeuchidzo inoramba ichienderera yekuti uhu hwaive husiri hurongwa hwaMwari hwekutanga.